Hindi: Ny Tsy Fifohana Sigara Sy Ny Lavantinà Mpilalao “Cricket” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2018 8:27 GMT
Mitatitra ny TodayKhabar fa asehon'ny vokatry ny fanadihadiana nataonà fikambanana tsy miankina iray fa manalavitra ireo lehilahy mifoka sigara ny ankamaroan'ny vehivavy. Araka ny voalazan'ireo vehivavy natao fanadihadiana, 75% no tsy te hanambady lehilahy mifoka sigara raha toa ka 67% kosa ireo tsy te hiaraka aminà mpifoka sigara. Toa avo dia avo anefa ny tahan'ny fandeferana eo amin'ny lehilahy raha ny 47% amin'izy ireo ihany no milaza fa tsy te hiarakaraka amin'ny mpifoka sigara. Nasehony fa tamin'ireo olona natao fanadihadiana, 46,4% no nilaza fa nandray ilay fahazarana mifoka sigara avy amin'ny fitarihan'ireo namana sy mpiara miasa mpifoka sns., raha toa ka 30% no mifoka ho fanalàna rarin-tsaina.
Vao haingana izay, namoaka ny drafitrasany ho an'ny fifaninanana Twenty20 (lalao “Cricket”) ao an-toerana, dia ny Indian Premier League (IPL), ny BCCI (Board of Cricket Control in India na ny Birao Fanaraha-maso ny Criket ao India), ary vao nanao lavanty ekipa maro izay novidin'ireo mpanefoefo toa an'i Mukesh Ambani, i Vijay Mallya mpanjakan'ny labiera, ary ireo kintan'ny sarimihetsika toa an'i Shahrukh Khan, Juhi Chawla ary i Preity Zinta miaraka amin'ireo trano fanaovan-draharaha hafa. Natao lavanty ireo mpilalao “Cricket” eo amin'ny sehatra Indiana & iraisam-pirenena roa andro lasa izay ka novidian'ireo ekipa isan-karazany alohan'ny dingana voalohan'ny IPL ho tanterahina amin'ny tapaky ny volana Aprily amin'ity taona ity.
Mbola mitatitra ihany koa ny TodayKhabar fa toa ny ekipa Hyderabad no mahery indrindra satria nandà ny fanasokajiana azy ho mpilalao mendrika indrindra i VVS Laxman, ilay kapiteniny & mpilalao vedety, ka nahafahan'ny ekipany nahazo ireo mpilalao handrarezina toa an'i Andrew Symonds & Adam Gilchrist avy ao Aostralia, Shahid Afridi avy ao Pakistàna ary i Herschelle Gibbs avy ao Afrika Atsimo, satria nahazo alàlana ampiasa 5 tapitrisa dolara fara-fahabetsany ny ekipa tsirairay mba hitazonana ny saham-pividianana hitovy ho an'ny rehetra. Samy mpively baolina mahery ireo mpilalao efatra ireo, izay afaka mandravarava ny fanafihan'ny mpanipy baolina manerana izao tontolo izao ary noho izany, safidy tsara ho an'ny endrika fohy indrindra an'ilay lalao. Mitovy amin'izay koa, tafita ny ekipan'i Chennai; na dia 1,5% dolara aza no nahazoana an'i M.S.Dhoni, kapitenin'ny ekipa Indiana One Day, nahavita nandresy lahatra an'i Jacob Oram, mahatana toerana samy hafa, sy i Stephen Fleming, kapiteny teo aloha, samy avy ao Nouvelle-Zélande izy roa ireo, ao ihany koa i Matthew Hayden mpively baolina malaza avy ao Aostralia ary ilay kapiteny Muttiah Muralitharan avy ao Sri Lanka. Toa tsy mandeha tsara ny ekipan'i Sharukh Khan sy i Juhi Chawla ao Kolkata, satria ilay kapiteny taloha Sourav Ganguly, sy ilay kapiteny Aostraliana Ricky Ponting, ary i Brendon McCullum, avy ao Nouvelle-Zélande fotsiny no ao aminy miaraka amin'ireo kintan'ny filalaovana “Criket” avy ao India Andrefana, dia i Chris Gayle sy ny iray amin'ireo mpanipy baolina mailaka indrindra maneran-tany, Shoaib Akhtar avy ao Pakistàna.
Sahala amin'izay ihany koa, tsy nahavita naka mpilalao tsara maro ny ekipan'i Mukesh Ambani, ka dia nihonona tamin'ilay Indiana mpively baolina Sachin Tendulkar, ilay Sri Lankey mpanoka-dalao, Sanath Jayasuriya, ary ilay kapiteny taloha sady mpanipy baolina mpanoka-dalao avy ao Afrika Atsimo, Shaun Pollock. Ny ekipan'i Preity Zinta, Mohali, moa dia tsy nanana afa-tsy goavana iray, dia i Brett Lee izany, ilay Aostraliana mpanipy baolina mandripaka haingana, ankoatra an'i Yuvraj Singh, mpanjakan'ny fanipazana baolina enina misesy, sy i Kumar Sangakkara & Mahela Jayawardene izay samy avy ao Sri Lanka. Somary navela an-jorony ireo ekipa sasany hafa ka ny voka-dalao ihany no hampiseho ny fomba nifanandrinan'ireo filaharana tsy dia malaza tamin'ireo mavesatra.
Mitatitra i Dilip Mandal avy ao amin'ny RejectMaal fa hanokana 2,9 lavitrisa dolara holaniana anatin'ny dimy taona ao India ny governemanta Indiana sy ireo fikambanana iraisam-pirenena maro hafa manoloana ny fandaharanasa ho fisorohana ny SIDA mba hiarovana ny olona tsy ho tratran'io aretina io. Tamin'ny fanasongadinana ny anaran'ireo fikambanana nanolotra volabe, nitatitra izy fa eo amin'ny 356 tapitrisa dolara amerikana eo no hanampian'ny Fikambanana Bill & Melinda Gates raha manodidina ny 447 tapitrisa dolara kosa no homen'ny Kitampombola Maneran-tany hiadiana amin'ny SIDA, ny Raboka ary ny Tazomoka ary manodidina ny 281 tapitrisa dolara no homen'ny Banky iraisam-pirenena, ankoatra ireo hafa tsy voatanisa. Azo jerena ato (rohy maty) amin'ny tranonkalan'ny Filankevi-pirenen'i India ireo vinavinam-pandaniana sns. rehetra. Mbola soratan'i Dilip fa ny 2,9 lavitrisa ao anatin'ny dimy taona dia midika fa mihoatra ny antsasakà tapitrisa dolara isan-taona izany no holaniana amin'ny aretina izay olona latsaky ny 2000 no maty anatin'ny herintaona, isa izay tsy mitombo akory. Kanefa, 10 tapitrisa dolara amerikana (eo ho eo) monja no lany tamin'ny Fandaharanasam-pirenena ho Fitiliana ny Homamiadana tamin'ny taona 2006-2007 ary nampitomboana ho 35,5 tapitrisa dolara eo ho eo io vola io. Ny olana, manodidina ny 440.000 no matin'ny homamiadana isan-taona. Etsy ankilany, 370.000 eo ho eo no matin'ny Raboka isan-taona ary eo amin'ny 56,5 tapitrisa dolara amerikana no lany amin'ny ady amin'ity aretina ity!! Ka dia manontany tena izy raha ny hanafoana ny fiparitahan'ny SIDA tokoa no tanjon'io fandaniam-bola be io ary tena manana fikasàna tsara ve ry zareo; manahy ihany izy ny amin'izany.